Jamaahiirta Real Madrid Oo U Codeeyay Kooxda Ay Doonayaan Inay Isku Soo Aadaan Semi-finalka Champions League Maanta - Laacib.net
Jamaahiirta Real Madrid Oo U Codeeyay Kooxda Ay Doonayaan Inay Isku Soo Aadaan Semi-finalka Champions League Maanta
by Saed Balaleti | Friday, Apr 21, 2017
Afarta kooxood ee isago soo hartay semi-finalka Champions League ayaa la ogaaday isbuucaan iyadoo Real Madrid, Juventus, Monaco iyo Atletico Madrid ay ka qeyb qaadanayaan isku aadka wareega afar dhamaadka Champions League ee la qabanayo maanta oo Jimce ah.
Laakiin ayay taageerayaasha Real Madrid doonayaan inay ku soo aadaan wareega semi-finalka ee Champions League?
Jariirada u janjeerta dhanka Real Madrid ee Marca ayaa codbixin ka qaaday taageerayaasha kooxda Los Blancos si ay u ogaadaan rabitaankooda, waxaana ka qeyb qaatay 4,829 taageerayaal ah iyadoo boqolkiiba 62 ay u codeeyeen in Real Madrid ay semi-finalka ku wajahdo Monaco.
Kooxda labaad ee ay u codeeyeen waa Juventus iyadoo boqolkiiba 20 jamaahiirta Los Blancos ay jeclaan lahaayeen inay isku soo aadaan kooxda Talyaaniga ee reebtay Barcelona.
Kooxdii ay sannadkii hore isla taageen finalka ee Atletico ayaa noqotay kooxda ugu danbeysa ee ay doonayaan inay isku soo aadaan iyadoo kaliya 18 boqolkiiba ay u codeeyeen inay jeclaan lahaayeen inay semi-finalka ku arkaan Madrid derby.
Si kastaba, dhanka jamaahiirta Atletico Madid waxa ay boqolkiiba 66 u codeeyeen inay doonayaan inay isku aadaan Juventus. Monaco ayaa aheyd kooxdii ku soo xigtay oo boqolkiiba 18 ay u codeeyeen, si la mid ah waxa ay jamaahiirta Atletico doonayaan inay ka fogaadaan Real Madrid haddii ay macquul tahay.
Isku aadka wareega afar dhamaadka Champions League waxa uu dhici doonaa maanta oo Jimce ah waxaadna si toos ah ugala socon doontaan Laacib.net haddii uu Eebe idmo.